အကောင်းဆုံး Telegram စက်ရုပ်များ၊ သူတို့ဘာတွေ ၀ ယ်ပြီးဘယ်လိုတပ်ဆင်သလဲ။ | Gadget သတင်း
Telegram နှင့်ယင်း၏ bot များမရောက်ရှိမှီယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရဤစကားလုံးသည်အမြဲတမ်းမကောင်းသောအလေ့အကျင့်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လှုပ်ရှားမှုများကိုအဓိကရည်ရွယ်သည့်အလိုအလျောက်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တူသည်။ ဒါပေမယ့် bot တွေရောက်လာတာက messaging platform ကို multifunctional application တစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာအမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလုပ်နိုင်မှာပါ။ Apple Store နဲ့ Google Play တို့လိုကွဲပြားခြားနားတဲ့ application store မှာရရှိနိုင်တဲ့အခြား application တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့မင်းကိုပြမယ် Telegram အတွက်အကောင်းဆုံးဘော့များ.
မည်သည့် application store ကိုမျှဖြတ်သန်းစရာမလိုခြင်းအားဖြင့် iOS ကဲ့သို့ iOS ကဲ့သို့သောဂေဟစနစ်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့နိုင်သည့် bot များကိုရှာရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ YouTube ဗီဒီယိုမှအသံများကိုသာ download လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်Telegram bot တွေကနေတစ်ဆင့်မြန်မြန်လုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခု။
မူလက တယ်လီဂရမ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားမိတ္တူပွားများပြားစွာစီစဉ်ထားသည် YouTube ပေါ်မှဗီဒီယိုများရှာဖွေခြင်း၊ Ghipy ရှိ GIFs နှင့် Markdown စာသားပုံစံကိုစကားဝိုင်းများတွင်ရဲရင့်ခြင်းသို့မဟုတ်စာလုံးစောင်းသုံးခြင်းများကိုရှာတွေ့နိုင်သည့် chats အားလုံးတွင်။ ၎င်းတို့ကိုရယူရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် @ ရေးရုံသာဖြစ်သည်။ ထိုသုံးခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည့်အရာကိုရွေးချယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်၎င်းကိုအောက်ပါနည်းလမ်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ "@vid video name", "@gif gif name "နှင့်" @Bold textaစာလုံးမည်းသို့မဟုတ်စာလုံးစောင်းဖြင့်ဖော်ပြလိုသောစာသား။
1 Telegram အတွက် bot အမျိုးအစားများ
2 Bot ဆိုတာဘာလဲ။
3 Telegram မှာ bot ဘယ်လို install မလဲ
4.3 Yandex ဘာသာပြန်သူ
4.9 Netflix မှာဘာတွေအသစ်လဲ?
4.13 YouTube ဗွီဒီယိုများ၏ mp3 ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
4.18 တရားမဝင် bot စတိုးသည် Telegram ဖြစ်သည်
5 Bot တစ်ခုဖန်တီးနည်း
Telegram အတွက် bot အမျိုးအစားများ
Bot အတွင်းမှာအမျိုးအစားနှစ်မျိုးတွေ့နိုင်တယ်။ Inline ဟုခေါ်သည့်အရာများသည်လျှောက်လွှာတွင်ပေါင်းစည်းနိုင်သည့်အရာများဖြစ်သည်။ ထိုအရာကို @ ရေးသားခြင်းဖြင့်ရေးသား။ bot ၏အမည်ကိုခွဲခြားခြင်းမပြုဘဲ - @gif trump သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏လက်ရှိသမ္မတ၏ gifs များကိုပြန်ပို့လိမ့်မည်။ Inline bot အများစုသည် application တွင်မူလထည့်သွင်းထားသည် ၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သီးခြားလွတ်လပ်သော bot များကို၎င်းသည် chat channel တစ်ခုကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်။ ဤအမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်တို့ Telegram ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှရှာဖွေပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်များနှင့်အညီပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းသွားရန်လိုသည်။ ဤ bot အမျိုးအစားသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကိုပေးသည် (သို့) အမျိုးမျိုးသောအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်သည် ၎င်းသည်စကားပြောဆိုမှုတွင်ပါ ၀ င်သော bot နှင့်တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်။ မရပါ.
Bot တွင်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်သောကြောင့် bot ဟူသောစကားလုံးသည် Robot မှလာခြင်းဖြစ်သည်။ Bot ဆိုသည်မှာလူတို့၏အပြုအမူကိုတုပသောပရိုဂရမ်သေးသေးလေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီကွဲပြားသောရလဒ်များကိုပေးသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်မည်သည့်အလုပ်ကိုမဆိုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်စက်ရုပ်များကိုတွေ့နိုင်သည်။ အချို့သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုလုပ်ဆောင်သောအက်ပလီကေးရှင်းကိုသင်မတွေ့ပါက၊ သူမအတွက် bot ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်.
Telegram မှာ bot ဘယ်လို install မလဲ
ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြသသောအစက်များကိုတပ်ဆင်ရန်၊ သင်စွန့်ခွာသော link ကိုနှိပ်ရုံသာဖြစ်သည်သို့မဟုတ် chats ထိပ်ရှိ search search box သို့သွားရန်လိုအပ်သည်။ စကားပြောဆိုမှုများကိုပေါ်လာစေရန်တွန်းချလိုက်ပါ။
ထို့နောက် Telegram ဂိမ်းချန်နယ်သည် chat window အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်ရန် search box ထဲရှိ bot ၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ရမည်။ ဂိမ်းအမြောက်အမြားမှကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။ နည်းလမ်းနှစ်မျိုးစလုံးသည်တရားဝင်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အား Telegram bot များဝင်ရောက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကျွန်တော်ကတော့ဒီ bot ဟာရှင်းပြစရာအများကြီးမလိုပါဘူး၊ ရှာဖွေရေးဝေါဟာရများကိုသာထည့်ရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့် bot သည်၎င်းအား၎င်း၏ကြီးမားသောဒေတာဘေ့စ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည့်ကွဲပြားသောရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြန်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့ပိုပြီးရလဒ်တွေကိုရချင်တယ်ဆိုရင်, ကျနော်တို့ဝေါဟာရများကိုအင်္ဂလိပ်လိုမိတ်ဆက်ရမယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအဖြေများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းများကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့် bot ပါ @pollbot bot မှတဆင့် Telegram လိုင်းများမှစစ်တမ်းကောက်ယူမှုများလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တုံ့ပြန်မှုနှင့်ရာခိုင်နှုန်းအရေအတွက်။
Yandex ဘာသာပြန်သူကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မယ် မည်သည့်ဘာသာစကားကိုမဆိုဘာသာပြန်ဆိုပါ နှင့်မည်သည့်ဘာသာစကားဖြင့်ငါတို့သည်ဤ bot မှဆက်ကပ်အပ်နှံချက်တင်ထဲမှာရိုက်ထည့်သောစာသား။ သို့သော်ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပုံမှန်ဘာသာပြန်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤနည်းဖြင့်ဘာသာပြန်များ၏ရလဒ်များကိုရယူခြင်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။
ဒီ bot ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိမှာပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ horoscope Telegram messaging application တွင် zodiac ၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုအရင်ပြုပြင်ရမည်။
Movies Tracker Bot သည်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောရုပ်ရှင်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ သတင်းအချက်အလက်အားလုံး Amazon IMDB ၀ န်ဆောင်မှုမှရယူသည်ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ပတ်သက်သောအကြီးမားဆုံးသောဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Movies Tracker Bot ထည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှာဖွေရန်အကွက်ထဲသို့သာရိုက်ရမည် @ movieS4Bot ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဗားရှင်းတော်တော်များများရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ကားရဲ့နာမည်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရင်၊ သူတို့အားလုံးဟာချက်တင်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်၊ အဲဒါကငါတို့တကယ်ရှာနေတာကိုစစ်ဆေးဖို့ပြproblemနာနည်းနည်းဖြစ်လာတယ်။
@pronunciationbot bot သည်စာသားကိုအသံ ၈၄ မျိုးအကြားအသံသို့ပြောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းသုံးနိုင်သည်သို့မဟုတ်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သူများအကြားဆက်သွယ်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အုပ်စုတစ်ခုအတွင်းထည့်နိုင်သည်။
ဤ bot သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်သုံးသောကွဲပြားခြားနားသောငွေကြေးအကြားလက်ရှိပြောင်းလဲမှုအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားချက်ချင်းအသိပေးလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ရုံရန်ရှိသည် ငွေပမာဏနှင့်ငါတို့ပြောင်းလဲခြင်းရယူချင်သောထံမှငွေကြေးရိုက်ထည့်ပါ ငါတို့ရဲ့ငွေကြေးအတွက်၊ ငါတို့ bot ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပထမဆုံးအကြိမ် configure လုပ်ရမည့်ပြည်တွင်းငွေကြေးဖြစ်သည်။
ဤ bot သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram channel တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ weatherman ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသောနေ့ဖြစ်မည့်ရာသီဥတုအကြောင်းကိုသာအသိပေးရုံမကလာမည့် ၅ ရက်အတွက်ရာသီဥတုခန့်မှန်းမှုကိုလည်းပေးလိမ့်မည်။ @weatherman_bot
ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်ထုတ်လွှင့်သောဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုကိုဤအမျိုးအစားများမှဖယ်ထုတ်။ မရပါ။ @netflixnewsbot မှတစ်ဆင့်စပိန်အပါအဝင်နိုင်ငံ ၃၈ နိုင်ငံရှိ Netflix catalog သို့ရောက်ရှိသည့် Premiere အသစ်တစ်ခုစီ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ bot @gamee ၎င်းသည် html5 တွင်ရေးဆွဲထားသည့်ဂိမ်းအမြောက်အမြားကိုကျွန်ုပ်တို့အား ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့အားအချိန်များစွာရစေပြီးရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေနိုင်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းများ၊ အမျိုးအစားများ၊ အများဆုံးကစားနိုင်မှု၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းရှိသည့်ကစားနည်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ကစားနိုင်ခြင်းအကြားသွားလာနိုင်သည်။ ဒီပလက်ဖောင်းကကမ်းလှမ်းဂိမ်းတွေထဲမှာ နှစ်ခုကိုမီးမောင်းထိုးပြရအောင်။
@Trivializa bot သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည် အင်္ဂလိပ်လိုဂန္ထဝင်အသေးအဖွဲလိုက်စားမှုကိုခံစားပါအနည်းဆုံးအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်္ဂလိပ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်တိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်လူအများကြားတွင်ကစားခြင်းများစွာပြုလုပ်သောဂိမ်းအနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်ဂန္ထဝင်တစ်ခုမှာ Hangman ဖြစ်ပြီးဂိမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတ်ကောင်ကိုလျှို့ဝှက်စကားလုံးခန့်မှန်းခြင်းအားဖြင့်ကြိုးမှကယ်တင်ရန်ကြိုးစားသည်။ ဤအခါသမယတွင်နှင့်အသေးအဖွဲလိုက်စားခြင်းနှင့်မတူဘဲ, @HangBot ကကျွန်တော်တို့ကိုစပိန်လိုကစားနိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်။
YouTube ဗွီဒီယိုများ၏ mp3 ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
အဆိုပါ bot @ dwnmp3Bot ၎င်းသည် YouTube ဗီဒီယိုများ၏အသံကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးသီချင်းများကိုအွန်လိုင်းတွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်စရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့နှင့်အမြဲတမ်းသယ်ဆောင်သည့်အချိန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဗွီဒီယိုအားဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အရည်အသွေးကိုတည်ဆောက်ရန်လည်းခွင့်ပြုသည်။ ဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ application များနှင့်ဖွင့်ပြီးမျှဝေပါ။
Telegram မှာအရာအားလုံးအတွက် bot တွေရှိတယ်။ filter တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုထပ်ထည့်ဖို့ခွင့်ပြုတယ်။ ငါတို့တတ်နိုင်သော bot @ icon8bot အကြောင်းပြောနေသည် ကွဲပြားခြားနားသော filter များထည့်ပါ ကျွန်တော် bot ထဲသို့ထည့်ထားသောပုံရှည်စာရင်းထည့်ပါ။
@AllWallpaperBot သည်ကျွန်ုပ်တို့စက်၏နောက်ခံအဖြစ်အသုံးပြုရန်အမျိုးမျိုးသော themes များ၏နောက်ခံပုံများကိုရှာဖွေရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၄ င်းတို့၏ပစ္စည်းများကိုစိတ်ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
အဆိုပါ bot @AndyRobot ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်၊ သူကသူနှင့်စကားစမြည်ပြောခွင့်ပေးပြီးအင်္ဂလိပ်အသိပညာတိုးတက်ပုံကိုတဖြည်းဖြည်းတွေ့မြင်လာရမည့်ပါမောက္ခအန်ဒီအားဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့အမြဲစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်နေရမယ်။ ဘယ်သူမှအံ့ဖွယ်အမှုတွေမလုပ်ပါဘူး။
သင်သည်အတွေ့အကြုံအသစ်များနှင့်လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံလိုပါက @strangerbot bot သည်ကျွန်ုပ်တို့အားထားလိမ့်မည် အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်အဆက်အသွယ်လုံးဝအမည်ဝှက် နှင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာမဆိုတိုင်းပြည်ကနေ။
တရားမဝင် bot စတိုးသည် Telegram ဖြစ်သည်
ဤဆောင်းပါး၌ Telegram အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သောအရေးအကြီးဆုံးနှင့်အသုံးဝင်သောစက်ရုပ်များကိုအတိုချုံးရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း၎င်းတို့သည်၎င်းတို့အားလုံးမဟုတ်ပါ။ သင်တရားဝင်မဟုတ်သော Telegram bot store နှင့်အမျိုးအစားအလိုက်ရှာဖွေလိုပါကသင် bot ကိုသာအသုံးပြုရမည် @storebot
ဤဆောင်းပါးကိုသင်ရောက်ရှိပြီးပါက Telegram ကကျွန်ုပ်တို့အားအကောင်းဆုံးပရိုဂရမ်များထဲမှ bot များသည်မည်သို့အားဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်ကိုသင်စတင်မြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိသည်။ သင် bug ကိုကိုက်ပြီးသင့်ကိုယ်ပိုင် bot များကိုစတင်ဖန်တီးလိုပါက @PaqueBot, လမ်းညွှန်သော bot များဖန်တီးရန်ဤလမ်းညွှန်ကိုသွားနိုင်သည် ၎င်းသည်ကုဒ်တစ်ကြောင်းတည်းကိုရေးစရာမလိုဘဲသင်၏ bot များကိုဖန်တီးရန်တစ်ဆင့်ချင်းကူညီလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » Telegram အတွက်အကောင်းဆုံး bot
Apple ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် Imagination Technologies ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်